Ukuvivinya kwe-ITIL okuzenzekelayo kokuzikhandla | ITIL Foundation Ukuhlolwa Exam Ukulungiselela
4 uJan 2018
Ukuhlolwa kwe-ITIL kwe-Mockakulutho ngaphandle kokuvivinywa kokuvivinywa nokuthi i-ITIL aspirants ithatha ngaphambi kokuvela kokuhlolwa kwesisekelo se-ITIL ukuze bakwazi ukuhlola izinga labo lokulungiselela. Ukuhlolwa kwesisekelo se-ITIL ukuhlolwa okubizayo futhi akufanele ukuzama ukuhlolwa kwe-ITIL ngaphandle kokuthatha I-ITIL ihlaziywa izivivinyo. I-ITIL isisekelo semfundo edingekayo yezobuchwepheshe be-IT kanye ne-ITES. Uma uya ukuhlolwa kwe-ITIL isisekelo noma ukuhlolwa kwe-ITIL ngaphandle kokulungiselelwa kusho ukuthi uthatha ingozi ye-USD 170. Ngithemba ukuthi ngeke uthande ukuthatha leyo ngozi.
Izinzuzo ze-ITIL Mock Test noma i-ITIL Foundation Ukulungiselela Ukuhlola
Ukujwayela ngezemvelo yokuhlola
Ukwandisa isivinini nokunemba
Ukuqonda kangcono imibuzo
ITIL isisekelo izivivinyo yizivivinyo ezibiza kakhulu, ngakho-ke umuntu kufanele azi kahle imvelo, Ukuhlolwa kwe-ITIL okuhlekisayo kusukela ITS kuyinto efanayo. Imibuzo ye-40 ezozama imizuzu ye-60, ibe indawo esimweni esifanayo futhi izwe inani elifanayo lokucindezela ngaphambi kokuhlolwa kwangempela. Ukuhlolwa kokuhlekisa kuzonikeza ukuzethemba futhi umhlanganyeli uzokhululeka ngesikhathi sangempela Ukuhlolwa kwesisekelo se-ITIL.
Imibuzo ku-ITIL izivivinyo ziyinkimbinkimbi kakhulu, ngakho ngaso sonke isikhathi iseluleko sokunikeza ukuhlolwa komkhuba ngaphambi kokuhlolwa kwangempela. Ngokuzama ukuhlolwa kwe-ITIL, kunika ukuqonda okuningi kwemibuto, izinhlobo zembuzo futhi okuzoholela ekwandeni ngesivinini nokunemba.
Zonke izivivinyo zinesikhathi esilinganiselwe, ngakho-ke kufanayo Ukuhlolwa kwesisekelo se-ITIL, Imibuzo ye-40 kumaminithi we-60 futhi amaphuzu adlula yi-70%, ngakho-ke isidingo esisodwa sokushesha. ITS.I-ITIL ihlekisa uchungechunge lokuhlolwa kuzokukwenza kahle ngesikhathi sokuphathwa ngenkathi uzama izivivinyo zangempela ze-ITIL.
ITIL Foundation Ukulungiselela Ukuhlolwa - 1
ITIL Foundation Ukulungiselela Ukuhlolwa - 2
ITIL Foundation Ukulungiselela Ukuhlolwa - 3
ITIL Foundation Ukulungiselela Ukuhlolwa - 4
As Ukuhlolwa kwesisekelo se-ITIL yizivivinyo ezibiza kakhulu futhi ngaphezu kwalokho kuyitshalomali ngekusasa lakho, ngakho-ke siqinisekisa ukuthi kufanele udlule ukuhlolwa kwangempela. Wethu I-ITIL Mock test series uzokunika imibuzo efana nayo noma uzicabangele kamuva Ukuhlolwa kwesisekelo se-ITIL ukuyeka, okukusiza ukuqonda imibuzo ngendlela engcono futhi elula.
Xhuma nathi ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa Ukuqeqeshwa kwe-ITIL kanye nokuhlolwa
Amagama angukhiye kubhu:
itil isisekelo ukuhlolwaimibuzo nezimpendulo 2016
itil isisekelo ukuhlolwaimibuzo nezimpendulo 2017
ukutadisha isikhathi esingakananiitil isisekelo ukuhlolwa
kuthatha isikhathi esingakanani ukutadisha i-itil isisekelo ukuhlolwa
Indlela i-ITIL Certification esebenza ngayo emsebenzini